The Most Zvinoshamisa nematende muGermany | Save A Train
musha > Travel Europe > The Most Zvinoshamisa nematende muGermany
Germany ndiyo sezvingatarisirwa imwe nyika yakanaka. Asi kana ukatanga kufunga nematende, iwe uchava kuida zvakatowanda. Uye zvose nokuti Germany ndiyo, maererano zhinji, Castle guru pasi pose.
Pane hondo yose zvinoshamisa nematende muGermany unofanira kushanyira. Munyaya ino, Tichava kunyanya chete yakanaka kwazvo vari pakati pavo. Tichatevera kukupa Info sei uchigona kusvika kwavari nechitima, ku anofadzwa vadikani zvose chitima!
Castle Neuschwanstein - The Most Zvinoshamisa Castle muGermany
Vakawanda kuzviziva somumwe nematende yakaisvonaka kwazvo munyika yose, kwete Germany. Kana kwete kuti, zviri zvirokwazvo inozivikanwa nokuva kurudziro nokuda Disney kasitoro. Kana iwe tora Kutarira ichi ngano kasitoro, unoziva sei. Unogona Zvechokwadi kunzwisisa nei zviri pakati zvikuru zvinoshamisa nematende muGermany!
Castle Neuschwanstein hadzina rakaisvonaka, asi sei wasvikapo? The chakanaka pamusoro Germany ndechokuti nzvimbo dzakawanda batanidza Via chitima. The dzepedyo chiteshi kuimba yemauto iri Fussen. zvisinei, unogona kusvika kuti chiteshi kubva Munich kana zvimwe maguta makuru German.
Hohenzollern - The Most Magical Castle muGermany
Hohenzollern Castle haisi chete pakati zvikuru zvinoshamisa nematende muGermany - zviri zvikuru mashiripiti Poshi. Unogona kuwana mumashoko muruwa Baden-Württemberg, pedyo Stuttgart. Baden-Württemberg dunhu ndiro underrated mumwe muGermany, asi kamwe munoona Castle ichi, zvauri akasungwa kushandura pfungwa dzako!
zvisinei, kusvika yemauto kunogona kuva matambudziko, kunyange zvachose zviripo. Nzira yakanakisisa ndeyokuti kutora chitima kubva Stuttgart kuna Hechingen. Zvino unofanira kutora rimwe refu kwidza uye kukwira mawere chikomo kusvika yemauto. Ndiri kungotamba! Unogona kutora chomuruki bhazi kana tekisi kubva Hechingen sezvo Castle rakanyatsojeka pedyo guta.
Hohenzollern Sigmaringen - zvikuru Castle muGermany
In yedu anozvininipisa pfungwa, hapana mazita zvikuru zvinoshamisa nematende muGermany anogona kuva wakakwana pasina kutaura Hohenzollern Sigmaringen. Ndicho zvikuru zvakawanda uye zvikuru Castle unenge nokusingaperi kuisa meso ako pamusoro! Uye kana kuti zvakanga zvisina kukwana, zviri zvakare chose mukare.
Naizvozvo Hohenzollern-Sigmaringen ari Baden-Württemberg; saka zviri zvachose nei nei vanhu vasiri vachirumbidza mudunhu sezvo akanaka kwazvo muGermany!
Kana kufamba - kubva unogona kuwana Castle mutaundi, zviri nyore nechitima. Nzira yakanakisisa ndeyokuti kutora chitima kubva Ulm kana Stuttgart uye kufamba yemauto.
MuFrankfurt kuna Ulm Zvitima
Stuttgart kuna Ulm Zvitima
Leipzig kuna Ulm Zvitima
MuNuremberg kuna Ulm Zvitima
Castle inomira oga pachikomo diki, uye anotarisa zvechokwadi yevedza. zvisinei, hazvina kudaro akasurukirwa kamwe iwe kufungawo kuti zviri zvichiri kugarwa! Ehe, ari Eltz mhuri akambomisa yemauto nokuda 33 zvizvarwa!
Kana totaura kwava ikoko, uchava kufamba kana kuwana bhazi kana tekisi kubva Hatzenport. zvisinei, zviri zvachose zvichiita kuti vasvike kuguta duku nechitima kubva Koblenz - pedyo guta guru.
MuFrankfurt kuti Hatzenport Zvitima
Bonn kuna Hatzenport Zvitima
KuCologne Hatzenport Zvitima
Düsseldorf kuna Hatzenport Zvitima
Saka ipapo iwe nayo, Nyora rakazara zvikuru zvinoshamisa nematende muGermany. Tinovimba kuti iwe uchaita kushanyira pane mumwe wavo uri rwendo inotevera! Kana uchida kuziva zvakawanda pamusoro vaifamba nechitima nematende izvi, inzwa wakasununguka Taura nesu chero nguva.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-spectacular-castles-germany%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#deutschland nematende europetravel trainjourney Tranride chitima mazano famba travelgermany